Tag: mobile mmepe | Martech Zone
Tag: mobile mmepe
Anyị na ụlọ ọrụ ibe anyị na-arụkọ ọrụ iji mepụta ngwa mkpanaka maka gam akporo na iOS ugbu a. Mgbe anyị mere ngwa nke anyị, ngwa ọdịnala a chọrọ ka elebara anya karịa ka anyị chere. Echere m na ọ na-ewe ogologo oge iji rụọ ọrụ na ahịa, ntinye, na mbipụta nke ngwa mkpanaka karịa oge mmepe ngwa! Anyị ga-edozi atụmanya maka ọrụ dị ka nke a n'ọdịnihu. Ngwa a bụ nnọchi